एमसीसी बहस:फतिमासँग कसले के भने,अब के हुन्छ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
एमसीसी बहस:फतिमासँग कसले के भने,अब के हुन्छ?
२०७८ भाद्र २९, मंगलवार २०:४३:००
अहिले सबैभन्दा चर्चामा रहेको बिषय हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) । यो विषयमा नेपालमा चिया पसलदेखि संसदसम्म बहस जारी छ । एमसीसी नेपालमा लागु गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
सम्झौता भएको ४ बर्षसम्म पनि विवादका कारण संसदमा टेवल भएको छैन । यसमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबीचमा पनि एकरुपता छैन । पाँच दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारमा तीन दल एमसीसीमा भएका केहि बुँदाहरु परिमार्जन गरेर लागु गर्न सकिने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेस भने जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने अडानमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारमा हुदा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै अडान राखेको थियो । तर सरकारबाट बाहिरिएपछि उसले पनि बोली फेरेको छ । एमसीसीको उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आएर फर्किसकेकी छिन् ।
उनले नेपाल बस्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटेर एमसीसीका बारेमा नेपालको धारणा बुझेकी थिइन । तर अधिकांश राजनीति दलहरु जुन सत्ता गठबन्धनदेखि प्रतिपक्षसम्म छन् जनभावना अनुसार अथवा राजनीति सहमतिका आधारमा निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् ।
एमसीसीले नेपालले ३ गते असोजसम्म संसदबाट पास नगरे दक्षिण अफ्रीकी मुलुक ट्युनिसिया लैजाने तयारी रहेको चर्चा बाहिर आएका छन् । तर अहिलेको अवस्थामा नेपालमा एमसीसी संसदबाट पास नहुने नेताहरुको अभिव्यक्तिले देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत यसलाई राजनीतिकरण गरिएको बताउँछन् ।
उनले यो जस्ताको त्यस्तै पास गर्दा पनि केहि नहुने बताउदै आएका छन् । कांग्रेसले एमसीसीले राष्ट्रियतामा कुनै असर नपार्ने बताउदै आएको छ । तर अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु भने एमसीसीको भित्री आसय इन्डोप्यासेफिक सैन्य रणनीति अनुसार हो भन्ने आशंका गदै आएको छ । जब कि फातिमा सुमार नेपाल आउनु भन्दा एक दिन पहिला लिखित जवाफ पठाएको थियो । तर उक्त जवाफ प्रति नेपाल सरकार र सत्ता गठबन्धन दलहरु नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
त्यहि भएर सुमार भन्दा पहिला नेपाल सरकारले सोधेका केहि अनुत्तरीत प्रश्नको जवाफ एमसीसीले पठाएपनि सरकार र गठबन्धनका नेताहरु आश्वस्त हुन सकेनन् । जसको कारण सुमार केहि पनि ठोस जवाफ नै नलिएर फर्केकी छिन् । गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्झौतामा भएको केहि विवादास्पद बुँदाहरु संशोधन नहुंदासम्म एमसीसी संसदमा टेवल नै हुन नसक्ने अडान नेकपा हुदा देखि नै राख्दै आएको छ । जुन अहिलेपनि निरन्तरता दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सुमारलाई पनि राष्ट्रिय सहमति नबनी केहि हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास हँुदा पनि नेपाललाई कुनै असर नहुने अडानमा छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको एमसीसी अहिले देउवाको प्रधामन्त्री कालमा पुन चर्चाको शिखरमा पुगेको छ ।
एमसीसीको उपाध्यक्ष नै नेपाल आएर यो विषयमा छलफल गर्ने भएपछि आम चासोको विषय बनेको एमसीसीबारे नेपाली कांग्रेसको मत पास हुनुपर्नेमा रहेको छ । सत्ता गठबन्धनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षसम्मका भनाइहरु हेर्ने हो भने एमसीसी अहिले नै संसदबाट पास हुनु छ परको कुरा टेवलपनि नहुने देखिन्छ । त्यहि भएर ३ असोसम्म संसदमा एमसीसी टेबल हुने छाँटकाट देखिदैन । महत एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
सत्तागठबन्धनको एक दल माओवादी दल भने एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने अडानमा रहेको छ । यो विषयमा तत्कालीन नेकपाले तीन सदस्यीय समिति मार्फत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । माओवादी केन्द्र अहिले पनि उक्त प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा एमसीसी लागु गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन् ‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न खोज्नु भएको छ ।
जस्ताको त्यस्तै पास हुँदैन । राष्ट्रियताका विषयमा उठेका प्रश्नहरुबारे स्पष्ट नभइ र विवादित बुँदा परिमार्जन नभएसम्म एमसीसी पास हुँदैन ।’ माओवादी एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी अघि बढाउन नहुने अडानमा छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ पनि आफ्नो दल एमसीसी जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास नगर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास हुनु हुँदैन भनेर माओवादीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छ । अहिले पनि त्यहि अडान यथावत छ ।
यो जस्ताको त्यस्तै पास हुँदैन ।’ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसदबाट पास गर्न खोजेको थियो । तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले टेवुल नगरेपछि ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै आलोचना गर्दे आएका थिए । केहि दिन पहिला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको रुपमा सम्बोधन गर्दा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसीसी के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर ओलीले फातिमालाई भेट्दा सरकार पक्षले के धारणा बनाउन त्यसपछिमात्र आफ्नो दलको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
जब कि उनी पहिला जसरीपनि एमसीसी पास हुनुपर्ने अडानमा मात्र थिएन् उनी निकट नेताहरुले लेखलेखेर पर्चा पम्पलेट नै एमसीसीको पक्षमा निकालेका थिए । अहिले भने विज्ञ र पार्टीमा एकरुपता बनाएर निर्णय गर्ने भन्दै द्धैध चरित्र देखाउन थालेको छ । तीन बर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै हालतमा एमसीसी पारित हुनुपर्ने अडानमा थिए ओली । तर अहिले आएर भने नेकपा हुदा झलनाख खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधन सहित पास गर्नु पर्छ भन्दै आएका छन् । २५ साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले एमसीसी संशोधनसहित पास हुनुपर्ने बताएका थिए ।
उल्टै सत्तारुढ दल नै एमसीसीबारे बोल्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए ‘एमसीसी हाम्रो पार्टीले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा जनताको भावना अनुसार संशोधन सहित पास हुनु पर्दछ ।’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पनि आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि नेकपा हुँदा खनाल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र एमसीसी पास हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । एमसीसीको बारेमा नेपालमा धेरै बहस छलफल भएको छ ।
जसपाको मत पनि संशोधन सहित एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । कार्यकारणी समितिका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दुबै देशबीच पत्राचार गरेर अन्यौल रहेका विषयमा प्रष्ट भएर पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा बहुमत पक्ष परिमार्जन सहितको एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्नेमा रहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ती जारी गरेर एमसीसी सम्झौता गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रममा नपरेकाले अब पनि पास गर्न नहुने अडान राखेको छ । जनमोर्चाले यो लागु हुनु हुदैन भनेर अडान राखेको छ ।
जनमोर्चाले यो परिमार्जन गरेर पनि लागु गर्न नहुने बताउदै आएको छ । लागु भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सत्ता गठबन्धनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षसम्मका भनाइहरु हेर्ने हो भने एमसीसी अहिले नै संसदबाट पास हुनु छ परको कुरा टेवलपनि नहुने देखिन्छ । त्यहि भएर ३ असोसम्म संसदमा एमसीसी टेबल हुने छाँटकाट देखिदैन । जब कि सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेकबाट ल्यायो । दलविभाजन सम्मबन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गरेको छ । तर सरकारले एमसीसीका बारेमा भने कहि कतै बहस चर्चा गरेको छैन । यसकारण तत्काल एमसीसी संसदबाट पास हुने संभावना नदेखिएको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् ।